- राजा महेन्द्रका छेउमा रहेर कीर्तिनिधि विष्टले केही आनीबानी, रहनसहन र सौख आदिको पनि अध्ययन गर्ने मौका पाए । जसअनुसार राजा महेन्द्रका इच्छाहरूमा शिकार खेल्नु पनि एउटा सौख मानिन्थ्यो । त्यस मामलामा आफू मात्र सरिक नभई आत्मीयहरूको एउटा जुलुस जस्तै भेला पारेर सौख बाँड्ने राजाको प्रवृत्ति थियो । वास्तवमा राजा महेन्द्रका लागि शिकार पनि एउटा खेल नै मानिन्थ्यो र त्यसमा कहिलेकाहीं कीर्तिबाबुलाई पनि संलग्न गराउन उनलाई मन पथ्र्यो । त्यसै परिप्रेक्ष्यमा २०२२ सालमा राजा महेन्द्र शिकार खेल्न महाकाली अञ्चलको शुक्लाफाटा जादा राजा महेन्द्रका साथ परराष्ट्रमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टको पनि उपस्थिति थियो ।
शिकारको खेल एउटा रमाइलो खेल मानिए तापनि त्यस बेला त्यो खेलसँगसँगै एउटा भयङ्कर प्रसङ्गको उपस्थिति पनि भएको थियो । त्यसै बेला जङ्गलको माझमा राजा महेन्द्रलाई प्रथमबार हृदयाघात भएको थियो । त्यस समय उनका साथ कीर्तिबाबु रहेका थिए ।
राजालाई हृदयाघात भएको ठाउँ एउटा मचान थियो जहा एउटा चकला मात्र बिछयाइएको थियो । हृदयाघातपछि महेन्द्रलाई त्यही चकलामा सुताइएको थियो । त्यस घटनाबाट त्यहा निक्कै ठूलो हाहाकारको सिर्जना भएको थियो । त्यस घटनाले कीर्तिबाबुको जीउ पानी नै पानी भएको थियो । हुन त त्यहा राजाका साथमा अनुभवी बङ्गाली डाक्टर हल्डर पनि गएका थिए र उनले हत्तपत्त राजाका पाखुरामा इन्जेक्सन लगाइदिएका थिए । अनि समयको फेरो समाउदै जादा राजाको अनुहारमा आशाको केही न केही प्रभाव देखा पर्न थालेको अड्कल कीर्तिबाबुलाई पनि भएको थियो ।
त्यस बेला राजा महेन्द्रलाई ठूलो पीडा भएको कीर्तिबाबु बताउछन् । त्यही पीडामा राजाले निक्कै रन्थनिनुपरेको थियो । राजाको शरीरभरि खलखल पसिना आएको थियो । त्यस बेला राजा महेन्द्र कीर्तिबाबुका पाखुरा र नारीको बीच भागलाई सिरानी लगाएर सुतेका थिए त्यसै बेला राजा महेन्द्रले उनलाई स्वतस्फूर्तरूपमा भनेका थिए "खोइ कीर्तिनिधि ? अब के हुने हो; मलाई जे भए पनि मेरो देश बाँच्नु पर्छ । म मरे पनि मेरो देश बाचिरहोस् ।" त्यसपछि राजा महेन्द्र मर्छा परेका थिए ।
राजा महेन्द्रको 'म मरे पनि मेरो देश बाचिरहोस्' भन्ने संवेदनशील देशभक्तिको वाणी सुनेपछि कीर्तिबाबुको छाती छियाछिया भएझै दुःखी भएको थियो । नेपालीका अभिभावक, नेपालीका भरोसाका केन्द्र र नेपालका एक सजग सबल प्रहरी राजा महेन्द्रको त्यो स्थिति हेरेर कीर्तिबाबु विक्षिप्तको जस्तै मानसिकतामा बसिरहेका थिए । राष्ट्रको चिन्तामा हृदयको रोदन पोख्तापोख्दै त्यस बेला राजा महेन्द्र अचेत भएका थिए ।
राजा महेन्द्रको उपचार्रार्थ जङ्गलमा तत्कालै मुटुविशेषज्ञ डा.मृगेन्द्रराज पाण्डे पनि झकिाइए र उनी पनि त्यहा गएर राजाको उपचारमा सरिक भए । अनि केही दिनपछि अमेरिकाबाट पनि चिकित्सकहरू आए जसअनुसार अमेरिकन डा.मेटिङ्ग पनि राजा महेन्द्रको स्वास्थ्यउपचारमा केन्द्रित भए । डा.मेटिङ्ग अमेरिकन राष्ट्रपति हावरका विशेष चिकित्सक थिए । हावरलाई पटक, पटक हृदयाघात भएको थियो । अनि उनका भरोसा नै डा.मेटिङ्ग थिए ।
राजा महेन्द्रलाई केही आराम भएपछि उनलाई टीकापुर ल्याइयो । कर्ण्ाालीको भङ्गालोनगिचै राजा महेन्द्रका लागि काठको एउटा कुटी बनाइएको थियो । त्यही नै राजाको सम्पूर्ण स्वास्थ्य उपचार गरिएको बेहोरा कीर्तिबाबु बताउँछन् ।
टीकापुरमा राजा महेन्द्रलाई स्वास्थ्यलाभ भएपछि त्यहा उपस्थित सबै जनामा उत्साहको वातावरण सिर्जना भएको थियो । राजालाई आराम हुन थालेपछि त्यहा उपस्थित व्यक्तिहरूको हर्षो सीमा थिएन । कीर्तिबाबुका अनुसार हरेक दिन त्यहा एउटा सानो कविगोष्ठीजस्तो पनि हुने गर्दथ्यो । एक दिनको त्यस्तै कार्यक्रममा एउटा क्यासेट पनि बजाइएको थियो । त्यो गीतकी रचयिता र गायिका रानी रत्न अर्थात रञ्जना शाह भएको जानकारी त्यहाँ उपस्थित सबैले पाएका थिए । अनि भोलिपल्ट राजदम्पतीको राजधानी सवारी भयो ।
काठमाडौमा राजा महेन्द्रको सवारी भएपछि राजधानीमा गाइगुइ हल्ला चल्यो कीर्तिनिधि विष्ट अलच्छिने मान्छे रहेछ । त्यो मान्छे राजासग गएर राजालाई हृदयाघात भयो । त्यो बेहोरा बिस्तारैबिस्तारै राजाका कानमा पनि पुग्यो । त्यस बेला त्यस्ता अन्धविश्वासमिश्रति टिप्पणीले राजालाई पनि केही दुक्ख लागेजस्तो भनाइ सुनिन्थ्यो ।
केही समयपछि राजा महेन्द्र पुनः शिकार खेल्न जाने प्रसङ्ग निक्ल्यो र राजदरबारमा रात्रिभोजको आयोजना पनि गरिएको थियो । त्यस कार्यक्रममा राजाबाट कीर्तिबाबुलाई पनि राजदरबारमा बोलावट भयो । त्यस बेला उपस्थित सम्पर्ूण्ा व्यक्तिहरूले सुन्ने गरी राजा महेन्द्रबाट एउटा शब्दावली प्रकट भयो "ए कीर्तिनिधि ? तिमी त अलच्छिना रे; तिमी मसग हिडेकाले मलाई हर्ट एटेक भयो; हगि ? ल ! फेरि म शिकार खेल्न जादै छु, तिमी पनि उहीं हिड । तिमी धीरेन्द्रसँग आऊ है ?"
कीर्तिबाबु फेरि टीकापुर जङ्गलमा पुगे । त्यहा राजाले भेट्नेबित्तिकै विष्टलाई प्रश्न भयो "कीर्तिनिधि शिकार खेल्ने हैन त ?" त्यति मात्र होइन, त्यसै कालमा राजाबाट उनीलाई कविता लेख्न पनि सुझाउ भयो । त्यसै प्रसङ्गलाई आधार बनाएर उनले भने महेन्द्रको प्रेरणा पाएर मैले पनि दसवटाजति कविता लेखेको छु । एउटा कविताले त रत्नश्री स्वर्ण पदक पनि प्राप्त गरेको थियो । अतिरथी सुरेन्द्रबहादुर शाहाको चिठीपत्रमा विष्टका केही कविता पनि रहेका छन् । तर कीर्तिबाबु कविता मात्र लेख्ने होइनन्; कुनै समयमा उनी अभिनयकलामा पनि लागेका थिए ।
त्रिचन्द्र कलेजमा पढेका बेला बालकृष्ण समको निर्देशनमा कीर्तिबाबुले नाटकमा अभिनय गरेका थिए । उनले त्यस बेला सेक्सपियरको नाटक जुलियस सिजरमा आङ्खनो सशक्त भूमिका पूरा गरेका थिए । त्यसै बेला कमल दीक्षितले पनि ब्रुटस्को भूमिकामा अभिनय गरेका थिए ।
टीकापुरस्थित राजा महेन्द्रको सवारीशिविरमा सुरेन्द्रबहादुर शाहाले पनि एउटा नाटकमञ्चनको कार्यक्रम गरेका थिए । त्यस ठाउमा बनाइएको मञ्चमा कीर्तिबाबुले पनि शाहाद्वारा निर्देशित अभिनय गरे । त्यस समय राजा महेन्द्रबाट पनि अभिरुचिपर्ूवक त्यो नाटक नजर भएको थियो । नाटक सकिएपछि राजाबाट अर्को वाक्य प्रकट भयो मन्त्रीको अभिनय सबैभन्दा राम्रो लाग्यो । त्यति बेला त्यहा नाटकमा अभिनय गर्नेहरूमा राजा महेन्द्रको उपचारमा संलग्न डा.मृगेन्द्रराज पाण्डे र डा. सच्चेकुमार पहाडी पनि थिए । साथै त्यहा रहेका डा. लक्ष्मण पौडयाल र अरू डाक्टरहरूले पनि नाटकमा अभिनय गरेर आफ्नो कलाको पर््रदर्शन गरेका थिए ।
कीर्तिबाबुले राजा महेन्द्रकै सङ्गतबाट कविता लेख्न थालेे । राजा महेन्द्र बराबर अरूलाई आफ्ना कविता सुनाउथे र आफू पनि अरूका कविता सुन्न चाहन्थे । एकपटक मोतीजयन्तीको उपलक्ष्यमा राजा महेन्द्रले कविताको शीर्षक 'देशको माटो' दिएका थिए । त्यस शीर्षकमा धेरैले कविता रचे । साथै कवि मवीवि शाहले पनि एउटा कविता रचेर कीर्तिबाबुका हातमा दिएका थिएः
जसले बिर्स्यो देशको माटो, जिउदै मर्यो त्यो
जसले सम्झयो देशको माटो बाँच्यो सधैं त्यो ।
मोती जयन्तीसम्बन्धी कविगोष्ठीमा राजाकै निर्देशअनुसार कीर्तिबाबुले नै राजाद्वारा रचित कविता वाचन गरेका थिए ।